Arsene Wenger Oo Aaminsan Inay Ka Dhaadhici Karaan Alexis Sanchez Inuu Sii Joogo Arsenal Xilli Man City Ay Ku Soo Jiidaneyso Ciyaarista Champions League – WWW.Gool24.net
Arsene Wenger Oo Aaminsan Inay Ka Dhaadhici Karaan Alexis Sanchez Inuu Sii Joogo Arsenal Xilli Man City Ay Ku Soo Jiidaneyso Ciyaarista Champions League
Tababare Arsene Wenger ayaa weli aaminsan in Arsenal ay ka dhaadhicin karto Alexis Sanchez inuu sii joogo Emirates Stadium ugu yaraan halka sanno ee uga haray qandaraaskiisa, sida ay qortay jariirada Daily Mail.
Inkastoo uu Sanchez shalayto sheegay inuu doonayo inuu ciyaaro Champions League oo aysan Arsenal ku jirin koobkaas xilli ciyaareedka soo socda, hadana ma doonayaan inay xiddiga reer Chile ka iibiyaan koox ay ku xafiiltamayaan Premier League, waxaana ay aaminsan yihiin in arintaan oo dhan ay isagu soo biyo shuban doonto lacag.
Manchester City ayaa ugu cadcad saxiixiisa haatan, waxaana ay ogyihiin in Arsenal ay taagan tahay boos adag madaama uu Sanchez ku bixi karo si bilaash ah marka uu dhamaado qandaraaskiisa kooxda dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
City waxaa sidoo kale dhiirogelin u noqon doona hadaladii uu weeraryahanka reer Chile uu sheegay intii uu fasaxa ku joogay dalkiisa, waxaana ay aaminsan yihiin inay ku soo jiidi karaan Etihad Stadium si uu u la midoobo tababarihiisii hore ee Barcelona Pep Guardiola.
Laakiin Arsenal ayaa aaminsan in Sanchez uu doonayo inuu joogo London, waxaan dalabkiisa mushahar ee ku dhow 400 kun ginni isbuucii uu cabsi geliyay kooxaha ajnabiga ah ee ay ku jirto Bayern Munich.
Tababare Wenger ayaa sheegay inay fariimo niyadsami leh is weydaarsadeen 28 jirkaan oo ku aadan mustaqbalkiisa, waxaana laga yaabaa inay Arsenal u ogolaato inuu dhameysto sannadkii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa halkii ay ka iibin laheyd haatan koox ay ku xafiiltamayaan Premier League.